IHulu's 'Hellraiser' Reboot yiJaw-Dropping NgokukaDavid S. Goyer-iHorror
Ikhaya	Iindaba ezothusayo zoLonwabo	IHulu's 'Hellraiser' Reboot yiJaw-Dropping NgokukaDavid S. Goyer
Umnqweno wethu wokuBanomdla uya kuba Yimbali nakwisihogo
by UTrey Hilburn III Septemba 14, 2021
by UTrey Hilburn III Septemba 14, 2021 4,879 imbono
Ukuza kukaHulu Hellraiser Inomdla njengesihogo. Italente eqhotyoshelwe kuloo nto ithembisa kakhulu. UDavid Bruckner ebekoluhlu lwam faves ebuyela kuyo yonke Uphawu. Uqhubekile nje ehamba neempahla. Indlu yasebusuku kwaye Isiko Zombini zazibalasele kwaye ziyinyani ngokwenene. Ke, ngubani olunge ngakumbi ukuphatha i- Hellraiser qalisa kwakhona. A Hellraiser Oko kukuthi "ukwehla kwemihlathi" ngokutsho komvelisi, uDavid S. Goyer.
“Ndiza kuthi sibuyele kwi-novella yoqobo ndaza ndawuhlonipha umsebenzi kaClive. Ndingatsho ukuba uDavid Bruckner yingqondi. Iyafota ngoku. Imifanekiso iyoyikeka kwaye iyamangalisa, kwaye iiCenobites ziwisa imihlathi. ” UGoyer uxelele uColider.
Ndiyayithanda le nto uBruckner ethatha le nto ngokungathandekiyo. Umbono wokuba ubuyela kuClive Barker Intliziyo yesihogo ziindaba ezimnandi kwaye kanye kanye le fan ifuna ukuyiva.
Eyokuqala ezimbini Hellraiser Iifilimu zazibalasele kwaye zixakekile kwaye zisoyikisa unanamhla. Ke, oku kuninzi ekunokuphilwa kuyo. Ifilimu iyaqhubeka okwangoku eSerbia ngenjongo yokukhululwa ngo-2022 eHulu.
Ngaba wonwabile malunga Hellraiser Qalisa kwakhona kwiBruckner? Sazise kwicandelo lamagqabaza.